Home Wararka Oradyahankii ugu horeeyay ee Somali-American ah oo lagu daray xulka dalka Maraykanka
Orodyahanka lagu magacaabo Cabdixakiim Cabdiraxmaan oo dhalasho ahaan ka soo jeeda qowmiyada Soomaalida ayaa ka mid ah orodyahanada u tartamaya wadanka Maraykanka tartanka Olombikada adduunka oo dhowaan ka furmaya dalka Japan.
Oradyahankaan ayaa lagu sheeegay in uu yahay kii ugu da’da weynaa ee Mareykan ah ee abid u tartamaka sameeya koox ka socota dalka Maraykanka ciyaaraha Olombikada.
“Waxaan ahay 44-jir, waxaanan xubin ka ahay kooxda Olimbikada Mareykanka. Waxaan u maleynayaa inaan ka mid noqon doono dadka ugu da’da weyn tuulada Olimbikada, gaar ahaan dhacdooyinka orodka. Kaliya waxaan matalayaa dhamaan ragga da ‘dhexaadka ah ee banaanka jooga kuwaas oo u maleynaya inaysan tartami karin”, yuu yiri Cabdixakiim.
Orodyahankaan ayaa ku dhashay Soomaaliya wuxuu ahaa ilmo yar markii qoyskiisa ay qaxooti ku noqdeen xeryaha qaxootiga. Waxay aakhirkii degeen Arizona oo wuxuu noqday muwaadin Mareykan ah.